Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Nexus 7 p
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Nexus 7
Tan iyo update ee Android 4.4 KitKat, in badan oo Nexus 7 milkiilayaasha ay wali sugayaan in ay helaan update news ay Nexus 7 kiniiniyada. Si kastaba, Google danbeyn ha doonaa KitKat u yimaadeen inay qof walba la isticmaalayo Nexus 7. Sidaas, waxaa jira walwal lahayn, iyo waqtiga uu yahay mid aad u dhow. Halkan, aan ka hadalno khasaaraha ka mid ah sawirrada Nexus 7.
Maxaad samaynaysaa marka aad la tirtiro sawirrada Nexus 7?
Photos yihiin quruxsan oo qaali ah, gaar ahaan kuwa aad qaaday xiliyo gaar ah. Marka aad si qalad ah iyaga tirtiray on Nexus 7, uma baahnid inaad u baahan tahay inaad naftaada si adag eedayn, helitaanka halkii ay xal.
Marka hore oo muhiim ah: Jooji isticmaalka Nexus 7 si degdeg ah ka dib markii sawirrada. Howlgal kasta oo ku lug leh qalabka karaan macluumaadka cusub, iyo xogta cusub overwrite kartaa sawiro tirtiray oo waxaan ka dhigi macquul aheyn in soo kabashada.
Labaad: Raadi Nexus 7 sawir kabashada qalab iyo bilowdo fulinaya soo kabasho sida ugu dhaqsaha badan. Weli waxaad leedahay fursad aad u weyn in ay dib u soo ceshano photos tirtiray ka Nexus 7 hor inta aan la overwritten. Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) waxay noqon kartaa doorasho fiican, haddii aadan horay u heysan hal.
Waxa ay haatan u samee: kabsado photos tirtiray ka Nexus in 3 tallaabo
Diyaari shaqada: download version maxkamad of 7 sawir kabashada software Nexus ah ee free hoos ku qoran.
Fiiro gaar ah: Nexus 7 kabashada sawir Tani waxay u keeneysaa inuu ka soo kabsado xog badan sawiro. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado lumay videos, music iyo dukumentiyada kale ee aad ku badbaadi on Nexus 7 iyo qalab kale oo ka Android ( aragto liiska qalabka ay taageerayaan iyo Android halkan ).
Tallaabada 1. sahlo debugging USB aad Nexus 7
Talaabadani waxay lagama maarmaan u tahay oo dhan Nexus 7 kiniiniyada. Haddii aad hore u karti, waxaad ku boodi kartaa tallaabada xigta. Haddii aan, hadda waxa aad sameyn kartid. Waxa ay noqon doontaa wax yar oo kala duwan u dhacna ku Nexus 7 kiniiniyada socda versions Android kala duwan.
Wixii Android 3.0 in 4.1: Tag Settings < fursadaha Developer <Hubi debugging USB
Wixii Android 4.2 ama cusub, Tag Settings < About Phone <Tubada tirada dhista dhowr jeer ilaa helo qoraal ah in aad ka yar tahay sameeysa mod <Back to Settings < Developer fursadaha <Hubi debugging USB
Tallaabada 2. Daahfurka barnaamijka iyo baarista Nexus 7
Ka dib markii ay u suuro-debugging USB, ordo Wondershare Dr.Fone for Android on your computer iyo aad u hesho Nexus 7 kiniinka ku xiran. Haddii wax walba si fiican u dhacaan, aad arki doonaa suuqa kala barnaamijka sida soo socota. Riix Start badhanka si ay u bilaabaan aad ka baareyso Nexus 7 photos tirtiray hadda.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawiro ka Nexus 7
Barnaamijku wuxuu u qabata baaritaan qoto dheer ku qaadato Nexus 7. ​​Marka la joojiyo, oo aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta laga helay aad Nexus 7, oo ay ku jiraan sawiro tirtiray. Fiiri qaybta Gallery oo sax ah waxyaabaha aad rabto. Markaas riix Ladnaansho button, wuuna idin ​​badbaadin karaa oo dhan photos tirtiray on Nexus 7 ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ugu iyaga isku mar, waxa kale oo aad soo kaban karto, files kale markii aad u baahan tahay. Wixii kale oo isticmaala qalab Android, waxaad samayn kartaa aragto liiska qalabka ay taageerayaan halkan si aad u hubiso haddii Wondershare Dr.Fone for Android shaqeeya qalab aad.
Raadi caawimaad ma kuu sameeyo? Waa maxay sababta aan kala soo bixi version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah si ay leeyihiin isku day ah oo hadda?